China Exterior Wpc Panel Cladding 219.28mm fekitari uye vagadziri | DEDGE
WPC WALL KUCHENGA
30% HDPE + 60% yehuni fiber + 10% yekuwedzera
Patent clip-yakapusa system
Hunhu hwezvakasiyana zvinhu Kunze kwemadziro kuputira
DEGE WPC madziro emadziro anogona kushandiswa mukutengesa uye kumba Kunze kwekushandisa, yakakodzera kune nyowani kana akagadziridzwa ekuvaka madziro. Semhando nyowani yemadziro ekushongedza zvinhu, ine yakasarudzika isapinda mvura basa, rakafanana ruvara kune zvigadzirwa zvehuni, kuiswa kuri nyore uye kugadzirisa, iri zvishoma nezvishoma kugamuchirwa nemusika seinotsiva zvigadzirwa zvehuni. Masvingo edu emadziro akagadzirwa neakasarudzika musanganiswa wemapuranga nemapurasitiki, izvo zvinosanganisa kuoneka kwehuni nekugara kwenguva refu kwezvinhu zvakagadzirwa, uye zvine hushamwari uye zvinoshandiswazve. Iyi zvakare yakakurumbira maitiro munyika.
Akajairika ekunze emadziro emadziro anosanganisira fiber cement mapaneru, aluminium-epurasitiki mapaneru, PVC mapaneru, uye nematombo zvigadzirwa.
1. Kushongedza kwakanaka
Fiber simende bhodhi, huni, uye matombo mavara echisikigo, ayo ari echisikigo uye akapusa. WPC mabhodhi uye mabhodhi esimbi akagadzirwa nemapatani akaita sehuni dzehuni, uye mavara emapuranga akarembera akapfuma.
2. Rwakawanda rwekushandisa:
Izvo zvinopokana nekutonhora kwakanyanya uye kupisa, yakasimba, anti-ultraviolet uye anti-kukwegura. Iyo ine yakanaka ngura kuramba kune acid, alkali, munyu uye nyoro nzvimbo. Hapana kusvibiswa, kushandurwazve; kuita kwakanaka kwezvakatipoteredza. Zviri nyore kuchenesa uye kubvisa post-kugadzirisa.
3. Kuita kwemoto:
Dombo rine repamusoro moto mashandiro, fiber simende bhodhi iri A1 giredhi, ichiteverwa nePV yekunze madziro akarembera bhodhi; okisijeni indekisi - makumi mana, murazvo retardant uye kuzvidzima-kudzima kubva pamoto; inosangana nechengetedzo yemoto yenyika B1 (GB-T8627-99), nepo simbi Yekunze madziro akatenderera iri giredhi B2, uye matanda ekunze ekumadziro anotenderera anoda kupendwa nependi isingadziviriri moto kusangana nezvinodzivirirwa nemoto.
4. High simba okuponesa:
Rutivi rwomukati rweWPC rwekunze rusvingo rwakarembera bhodhi runogona kuve nyore kuisa polystyrene furo uye zvimwe zvekushisa zvekuisa, kuitira kuti iro rekunze rusvingo rwekupisa maficha riite nani. Iyo yekupisa yekuisa zvinhu yakaita sekuisa dura re "donje" pamba, nepo iyo WPC bhodhi iri "bhachi". Iyo simbi yekunze kwemadziro kutenderera ndeye kusangana kwakabatana kweye thermal insulation zvinhu polyurethane uye simbi simbi ndiro. Iyo yekupisa yekupisa maturusi ndeyekanguva isingaenzanisike, zvinoenderana neukobvu hweye thermal kuputira zvinhu. Nekudaro, nehupamhi hwakafanana, polyurethane inoshanda zvakapetwa kaviri sebenzene board.
5. Rutivi rusina mvura:
WPC yekunze madziro emadziro akabatana nekukiya nekurembera, izvo zvinogona kutamba chinzvimbo chekusaziva kudzivirira mvura. Masimbi akarembera mapaneli akafanana.
6. Nyore kuisa uye yakaderera mutengo:
Dzose kuvaka kwakaoma; nyore kuisa uye kusimba uye hwakavimbika. Iyo yekushongedza chirongwa neyekunze madziro akarembera bhodhi ndiyo inonyanya kushanda-yekuchengetedza yekushongedza scheme. Kana paine kukanganisa kwakasarudzika, iwe unongoda kutsiva iyo nyowani ndiro yakarembera muchikamu chino, chiri nyore, nekukurumidza uye zviri nyore kuchengetedza.
7. Hupenyu hwakareba hwebasa:
Dombo rine hurefu hwakareba hupenyu, fiber simende bhodhi rinopfuura makore makumi mashanu, anti-ngura huni inopfuura makore makumi matatu, WPC yekunze kwemadziro bhodhi ine hupenyu hwebasa hwemakore angangoita makumi maviri nemashanu, uye pamusoro pacho pane mbiri-rukoko co-extrusion naGeloy akawedzera. Hupenyu hwechigadzirwa chigadzirwa hunopfuura makore makumi matatu. Kana fluorocarbon pendi ichishandiswa kune iyo siding, inogona kugara kweanopfuura makore gumi neshanu.
Hapana Warping kana Splintering
Slip-inomirira kufamba nzvimbo
15 Makore Waranti
95% yakadzoreredza huni nepurasitiki
Mazuva makumi maviri nemakumi maviri neshanu kune rimwe 20'ft mudziyo
30% yakaiswa, iyo yasara inofanirwa kubhadharwa isati yaendesa
Nhovo kana hombe chiputiriso
Wpc Wall Panel Kugadzira Maitiro
A. Pe mapurasitiki huni parizvino ndiyo mhando inonyanyo shandiswa yemapurasitiki huni mupasi rose, ndiko kuti, yedu WPC YEMAHARA, WPC FENCING. Chekutanga pane zvese, ngatinzwisisei mbishi zvigadzirwa zvePE epurasitiki huni zvigadzirwa. Huru mbishi zvigadzirwa ndeye PE mapurasitiki uye poplar huni hupfu. , Toner, anti-ultraviolet absorber, inopindirana.
1. PE mapurasitiki: Kuenzanisa kwakakwana kwemutengo uye fusion HDPE ndiyo sarudzo yakanakisa, uye huni dzeplastiki mumusika dzinoshandisa zvinhu zvakadzokororwa sechinhu chikuru chakagadzirwa, icho chinoderedza kusvibiswa chena uye chinoita kuti nharaunda yedu ive nehutano uye zvakatipoteredza. "Recycled" inonzi zvakare zvishandiso zvepurasitiki. Mapurasitiki ese anogadzirwa nemaindasitiri anogona kushandiswazve kuburikidza neimwe nzira yekugadzirisa anonzi mapurasitiki akadzokororwa; zvishandiswazve zvigadzirwa zvakapatsanurwa kuita akawanda mamakisi, senge akakosha giredhi zvishandiswezve zvinhu uye giredhi rekutanga zvishandiswazve zvigadzirwa. , Secondary marara, tertiary marara kana kunyange marara, zviri nyore kunzwisisa zvinorehwa chaizvo, iyo yepamusoro giredhi, kushoma kusachena kwemukati kwepurasitiki, marara acho zvakasikwa zvakakwirira mune zvakasviba zvemukati, uye nesarudzo yezvinhu zvakasarudzika zvakananga inokanganisa kusarudzwa kwehuni hwepurasitiki Nekuti epurasitiki-huni zvinhu inzvimbo umo huni hupfu hwakaputirwa nepurasitiki, kana chisina kuchena zvirimo mupurasitiki zvakakwirira, uye huwandu hwepurasitiki pachahwo hudiki, zviri muropa haukwanise kuputira huni hupfu zvakanaka .
2. Hupfu hwehuni: Kuti uwane fusion yakakwana yehuni neplastiki mupurasitiki huni, hapana zvinongodiwa chete pamapurasitiki, asiwo hupfu hwehuni: iyo yakatsetseka hupfu hwehuni hwehuremu hwakaenzana, yakakura nzvimbo yepamusoro. yehupfu. Iyo yepamusoro chikamu chepurasitiki chinodiwa; pane zvinopesana, iyo yakakura huni yeupfu hupfu, idiki nzvimbo yepamusoro yeupfu, uye yakadzikira chikamu chepurasitiki chinodiwa panguva yepurasitiki fusion. Mushure memakore mazhinji ekuyedzwa, poplar huni hupfu ndiyo yakanakisa huni hupfu hupfu, uye saizi rehupfu hwehupfu ndiyo yakanakisa mukukora kweiyo 80-100 mesh; iyo poda yakanyanyisa, mutengo wekugadzirisa wakakwira, iro repurasitiki rinoda zvimwe, uye mutengo wacho wakakwirira, asi Iyo yakaumbwa epurasitiki-huni chigadzirwa chine kukwirira kwepurasitiki; kana hupfu hwakanyanya, mutengo wekugadzirisa wakaderera, uye izvo zvinodiwa pakuumbwa kwepurasitiki zvishoma, asi chigadzirwa chepurasitiki-chehuni hachina kusanganiswa zvakakwana, chinopwanyika, uye chiri nyore kutsemuka.
3. Zvinhu zvekubatsira: Basa guru re toner kuenzanisa iwo ruvara rweplastiki huni zvinhu. Parizvino, iko kunyorera kukuru kwePE mapurasitiki huni isorganic ruvara hupfu. Iyo ine zvirinani anti-kupera mashandiro ekushandisa kwekunze, izvo zvakasiyana neye organic organic inoshandiswa yemukati PVC PVC ecological huni. Upfu, organic toner ruvara rwakajeka uye kupenya. Basa guru reiyo anti-ultraviolet absorber ndeyekuvandudza iyo anti-ultraviolet kugona kwepurasitiki huni kushandiswa kwekunze, uye kugadzirisa anti-kukwegura kuita. Compatibilizer inowedzera inokurudzira kuwirirana pakati pehuni nehuni.
B. Nzwisisa zvigadzirwa zvemapurasitiki huni muchidimbu, danho rinotevera kupura. Zvinoenderana nezvakataurwa pamusoro apa zvigadzirwa, sanganisa zvinoenderana nechimwe chiyero, buda mapurasitiki emapellets kuburikidza nekupisa kwakanyanya kwetembiricha, woarongedza kuti vashandise. Basa hombe remidziyo yepelletizing ndeyekuona iyo pre-plasticization maitiro ehuni hupfu nepurasitiki, kuona yunifomu kusanganisa kweiyo biassass upfu zvinhu uye PE mapurasitiki mumamiriro ezvinhu akanyungudika, uye kuitisa pretreatment yekugadzirwa kwepurasitiki zvigadzirwa zvehuni. Nekuda kwehurombo hunyoro hwehuni-mapurasitiki anonyungudika, dhizaini yehuni-epurasitiki zvinhu pelletizer uye epurasitiki pelletizer haina kunyatsofanana. Kune mapurasitiki akasiyana, dhizaini yepelletizer inosiyanawo. Iyo pelletizer inowanzo shandiswa polyethylene kazhinji inoshandisa conical twin-screw extruder, nekuti polyethylene inopisa-inonamira resin, uye iyo conical twin-screw extruder ine simba rekuveura simba uye urefu hweshure hwakaenzana. Iyo twin screw extruder ipfupi, iyo inoderedza nguva yekugara yezvinhu zviri mudhiramu. Iyo yekunze dhayamita yeiyo screw ine conical dhizaini kubva muhombe kusvika kudiki, saka compression ratio yakakura kwazvo, uye izvo zvinhu zvinogona kuiswa mupurasitiki zvakazara zvizere uye zvakaenzana muhari.
C. Mushure mekupfava, inopinda muchikamu che extrusion. Gadziriro dzinoverengeka dzinofanirwa kuitwa pasati pabuda extrusion:
1. Ita shuwa kuti hapana zvakasviba kana zvidimbu zvemamwe mavara zvinosara muhopper kudzivirira ruvara rusina kuchena rwehuni hwepurasitiki hwakagadzirwa;
2. Tarisa kuti mudziyo wekubvisa weakabuda haugadzike uye uve nechokwadi chekuti dhigirii rekutsiva harisi pasi pe -0.08mpa. Bhagi rekuchenesa rinofanira kucheneswa kaviri pashifti kana zvakajairika. Usashandise maturusi esimbi kuchenesa maburi ekungonetesa, uye shandisa mapurasitiki kana matanda emapuranga kuchenesa tsvina mumaburi ekudzimisa padhiramu;
3. Tarisa kana hopper yakashongedzwa nesimbi firita. Iwo matinji anosvinwa kuburikidza nesimbi kubvisa tsvina yesimbi yakasanganiswa nezvimedu, inoderedza kupfeka kwesimbi yakasviba mukati memidziyo uye nekuona kusangana kwakakwana kweakaumbwa epurasitiki-huni profiles.
4. Kunyangwe iyo inotonhorera system yemvura iri kushanda zvakajairika. Iyo yakakwana inotonhorera sisitimu yemvura ndiyo inodikanwa michina yekutonhora mushure meplastiki-huni extrusion. Kurapa kwakakodzera panguva kunogona kuvimbisa chimiro chakanaka chemapurasitiki-huni profiles.
5. Isa mapurasitiki-huni anoumba, uye gadza akasarudzika kuumbwa zvinoenderana nemaprofiles anofanira kugadzirwa.
6. Tarisa uone kana pneumatic yekucheka muchina uye zvimwe zvinokanganisa zvinhu zvinogona kushanda zvakajairika.
Iko tembiricha yeiyo ichangobva kubviswa purasitiki-huni chimiro yakakwira zvakanyanya, uye inoda kuiswa nemaoko panzvimbo yakati sandara. Mushure mekunge iro mbiri ratonhorera, rinogadziriswa uye kupakurwa. Kunyangwe iyi nhanho iri nyore, yakakosha kwazvo. Kana iyo fekitori ikasateerera izvi, izvo zvigadzirwa zvefekitori zvinowanzove nehurema. Matanda epurasitiki asina kuenzana anotungamira nyore kune akasiyana mashupu epamusoro neepasi pechigadzirwa mushure mekukuya nekugadzirisa kwekupedzisira. Uye zvakare, asina kuenzana profiles anounza mamwe matambudziko kune iyo kuvaka uye kukanganisa mamiriro emamiriro.
E. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, gadzirisa mapurasitiki-huni profiles:
1. Kukuya kurapwa ndiko kubvisa rukanda rweganda repurasitiki rinogadzirwa kana iyo purasitiki-huni chimiro chaburitswa, kuitira kuti chimiro chepurasitiki-chehuni chiwedzere kupfeka kuramba kana ichiiswa kufekitori.
2. Embossing kurapwa: Mushure mekumusoro kweprofile kukwenenzverwa, mapurasitiki-huni akaverengerwa kuita kuti pamusoro peplastiki-huni chimiro huve nehutu-hwakafanana.
3.Kucheka, kugadzirisa tenoning, saizi yakagadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, uye zvigadzirwa zvakagadzirwa senge zvinodiwa tenoning.
4. Mushure mekugadziriswa kwepamusoro kwapera, danho rekupedzisira kurongedza chigadzirwa. Kurongedza zvine musoro kwechigadzirwa kunogona kudzora kukuvara kunokonzerwa nechigadzirwa panguva yekusununguka.
Injiniya Nyaya 2
Pashure: Hapana Ruvara Fade Kunze Co-Extrusion Wall Panel 169.26mm
Zvadaro: Co Composite Kuwedzeredza Wall Kuputira
Chekutanga: isa keel kutanga, iyo Keel inogona kuve huni kana Wpc
Chepiri: gadzirisa rekunze remadziro pani pane keel nesimbi bhakoro
Chetatu: gadzirisa simbi simbi uye iyo keel ine mweya wechipikiri pfuti kana screws
Chechina: mushure mekuisa rinotevera rekunze wpc madziro epaneru mukati memadziro epamusoro epanhare, shandisa pfuti yemhepo chipikiri kana sikuruwa yekufungidzira simbi simbi uye keel
Cheshanu: dzokorora danho rechina
Chetanhatu: mushure mekupedza kumisikidzwa kwepaneru, wedzera L kumucheto mabhendi kutenderedza
Kuwandisa 1.33g / m3 (Yakajairwa: ASTM D792-13 Maitiro B)
Tensile simba 24.5 MPa (Yakajairwa: ASTM D638-14)
Flexural simba 34.5Mp (Yakajairwa: ASTM D790-10)
Flexural Modulus 3565Mp (Yakajairwa: ASTM D790-10)
Impact simba 84J / m (Yakajairwa: ASTM D4812-11)
Kuoma kwemahombekombe D71 (Yakajairwa: ASTM D2240-05)
Thermal kuwedzera 33.25 × 10-6 (Yakajairwa: ASTM D696 - 08)
Hapana Ruvara Fade Kunze Co-Extrusion Wall Panel 1 ...
Kunze Kwakaumbwa Wpc Wall Cladding 218.27mm
Wpc Wall Paneli Kuputira
Isina mvura uye Yakasimba WPC Wood Fenzi
Yakanakisa Hunhu China Wpc Wallpanel